DHAGEYSO:Shacabka Kajiado oo doonaya in sare loo qaado tacliinta ismaamullada | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Shacabka Kajiado oo doonaya in sare loo qaado tacliinta ismaamullada
DHAGEYSO:Shacabka Kajiado oo doonaya in sare loo qaado tacliinta ismaamullada
Dadweynaha ku nool ismaamulka Kajiado ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha ah in musharaxiinta xilalka siyaasadeed ee sanadka 2022-ka laga doonayo in ay haystaan shahaadada Degree.
Waxay sheegeen in ay lagama maarmaan tahay ka hor inta aan sharcigan la dhaqangelin in ismaamullada kala duwan ee wadanka ay ka jirto sinnaan dhanka tayada waxbarashada ah.
Dadweynaha ayaa qabo in ay jiraan shakhsiyaad iyaga oo aan waxbarashada heer sare ka gaarin si hufan ugu soo adeegay iyo kuwo kale oo waxbartay balse aysan waxqabadkoodu ku qancin .
Shacabka ayaa soo jeediyay in tixgelin gaar ah la siiyo carruurta ku nool deegaannada xoolo dhaqatada si looga soo dhiso dhinaca waxbarashada ka hor inta aan musharaxiinta shardi looga dhigin shahaado jaamacadeed.
Previous articleWilliam Ruto oo sheegay inuusan ka bixi doonin Jubilee ka hor doorashada guud